Azịza ajụjụ | January 2020
Ịwụnye Microsoft Okwu na kọmputa
Esemokwu na Samsung 860 EVO SSD
Ndewo Enwere m nsogbu nke ọbụna onye na-emepụta ihe apụghị inyere aka, eziokwu bụ na m zụtara SSD EVO 860 256 gb, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma, o yiri ka ọ na-ebu ngwa ngwa, ma nsogbu ahụ ka dị. Usoro ihe omume nke na-arụ ọrụ na Samsung SSD Magician 5 esitelarị budata ụdị ngwa ngwa ọhụrụ ahụ, ọ dịghịkwa achọ ka ọ rụọ ọrụ na PC m.
Inyocha disk diski maka imezi ihe
Ndewo M gara na saịtị gị iji lelee diski ike n'ụzọ ụfọdụ, n'ihi na PC malitere ịrụ ọrụ ka njọ, ma amaghị m otú e si emeso ya. M na-agụ ọtụtụ ozi dị iche iche, elere m anya, enwetakwara m ihe ọmụma banyere disk diski (500 GB HDD). Amaara m na ọ bụrụ na ọtụtụ ncha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ - nke a dị njọ. Enwere m 0 uhie na 1 -acha anụnụ anụnụ, ọ bụ naanị 1 acha anụnụ anụnụ, mana anaghị m ama ole "nkịtị" maka draịva siri ike, mana ole ka "adịghị adị" (diski ike bụ 5-6 afọ) Ọ ga-amasị m ka ị nyere m aka ekwu na ole "ndị nkịtị" na-acha uhie uhie na-acha anụnụ anụnụ na-agba agba, na ole mmadụ "adịbeghị" ma oge eruola ịtụgharị uche na ị gbanwee draịvụ ike ahụ.
Igwefoto IP nwere ike ịrụ ọrụ Wi-Fi
Ezi ụbọchị! Ụnyaahụ m zụtara Vimtag Snowman Wireless PTZ Cloud IP Camera CP1 Igwefoto IP. Taa, amalitere m ịwụnye ya, emere m ya, ọ dị ka ntụziaka ndị ahụ, ebe ọ na-ekwu na ị ga-ebu ụzọ jikọọ igwefoto ma ọ bụ USB ma ọ bụ eriri eletrik. M ejikọrọ ya na USB, wee gaa Wi-Fi. Ihe niile dị mma, igwefoto na-arụ ọrụ, wee gaa otu kilomita abụọ, elele, ihe nile dị anya nke ọma.
Na Windows 10, nsogbu na ịwụnye ngwa. onye na-egbochi nchebe anaghị enyere aka. Mgbe ị malitere installer, ihe ịrịba ama "nzukọ gị egbochiri ngwa a site na iji ọrụ nchịkwa ngwa na onye nchekwa Windows" gbapụta elu. Gụọ ndụmọdụ ahụ, a na-atụ aro ka ị gbanyụọ bọtịnụ Nche na BIOS. ma nke a abụghị nke dị, ya bụ, na bọtịnụ buutụ nwere ndepụta nke ngwaọrụ ndị na-ebute paswọọdụ na nchekwa taabụ, setịpụ ihe dị mkpa F12 ....
Kedu ihe iwu menu kachasị mkpa "GỤKWU" na Windows 7-10? Mmemme ndị dị aṅaa ga-agba ọsọ site "EXECUTE"?
Ezi ụbọchị niile. Mgbe ị na-edozi nsogbu dịgasị iche iche na Windows, ọ na-adịkarị mkpa ime ngwa dị iche iche site na menu "Run" (na-ejikwa mpaghara a, ị nwere ike ịme ihe omume ndị ahụ na-ezoghị na ya). Otú ọ dị, a pụrụ ịme ụfọdụ mmemme iji Windows Control Panel, mana dịka iwu, ọ na-ewe ogologo oge.
Kedu ihe omume kacha mma maka ịrụ ọrụ na ihe oyiyi ISO?
Ezi ụbọchị! Otu n'ime ihe oyiyi disk kachasị ewu ewu nke nwere ike ịchọta na net bụ ịrụ ụka na usoro ISO. Ihe kachasị mma bụ na ọ dị ka ọtụtụ mmemme na-akwado usoro a, ma olee otu ọ dị mkpa iji chekwaa onyinyo a na diski ma ọ bụ mepụta ya - otu oge na mgbe ahụ ... N'isiokwu a, m ga-achọ ịtụle usoro kachasị mma maka ịrụ ọrụ na Ihe oyiyi ISO (na nyocha nke m, n'ezie).
Kedu esi agba ọkụ site na ISO, MDF / MDS, NRG?
Ezi ehihie Eleghi anya, onye ọ bụla n'ime anyị na-ebudata ihe oyiyi ISO na ndị ọzọ na egwuregwu dị iche iche, mmemme, akwụkwọ, na ihe ọzọ. Mgbe ụfọdụ, anyị na-eme onwe anyị, na mgbe ụfọdụ, ha nwere ike ịdekọ na ezigbo mgbasa ozi - CD ma ọ bụ DVD diski. Ọtụtụ mgbe, ịnwere ike ịkụ ọkụ disk site na ihe oyiyi mgbe ị na-aga igwu egwu ya ma chekwaa ozi na mgbasa ozi CD / DVD ọzọ (ma ọ bụrụ na njehie ma ọ bụ kọmputa na OS malfunctions) emerụ, ma ọ bụ na ịchọrọ disk iji wụnye Windows.
Ụdị Excel iji chọpụta positivity
Esi mee Excel. Enwere ya n'oge a na-achụpụ ihe onwunwe. Otu onye agha e goro n'ọrụ na 04/01/1997 ma wepụ ya na 07/31/2017 Site na ntinye nke 916 nke 12/29/1997, a ghaghị inye ya jaket oyi nke 1 ibe maka afọ 3, ma site na ntinye nke 148 na 07.2008, a ga-enyefe otu ibe maka afọ 4; site na 14.
Na-agbanwe ihe oyiyi na foto
Ezi ehihie Ruo ugbu a, netwọk ahụ nwere ike ịchọta ọtụtụ narị puku eserese na foto dị iche iche. A na-ekesa ha niile n'ụdị dị iche iche. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ha, mgbe ụfọdụ ọ dị mkpa ka ị gbanwee usoro ha: iji belata nha, dịka ọmụmaatụ. Ya mere, n'isiokwu taa, anyị ga-emetụ ọ bụghị nanị na ịgbanwere ihe oyiyi, ma na-ebikwa na usoro ndị a na-ewu ewu, mgbe na nke dị mma iji ... Ihe ndị dị na 1.
Gbanyụọ touchpad na laptọọpụ
Ezi ụbọchị! Touchpad bụ ngwaọrụ na-emetụ aka bụ nke a kwadoro maka ngwaọrụ ndị dị obere, dịka laptọọpụ, netbooks, wdg. Touchpad na-azaghachi mgbe ị na-esetị aka aka n'elu. Ejiri ya dị ka onye na-anọchi anya (ọzọ) ka ọ na-emebu. Ọ bụla laptọọpụ ọgbara ọhụrụ nwere ihe nkwụnye aka, naanị, dịka o siri pụta, ọ dịghị mfe ịgbanye ya na laptọọpụ ọ bụla ... Gịnị mere ị ga-ewepụ touchpad?
N'ụwa taa, kọmputa na-abanye n'ime ndụ anyị. Ọtụtụ ebe anaghị eche na ọ bụghị PC: mgbagwoju anya nke mgbakọ na mwepụ, imewe, ịme ihe, njikọ Ịntanetị, wdg. N'ikpeazụ, ọ bịara ịbịaru! Ugbu a, ọ bụghị nanị ndị na-ese ihe, mana ndị na-ahụkarị ndị hụrụ n'anya nwere ike ịnwa ịbịaru ụdị "ihe ngosi" site n'enyemaka nke mmemme pụrụ iche.
Kedu ka esi edozi nchekwa diski na data niile na Windows?
Ezi ụbọchị. Ọtụtụ mgbe n'ọtụtụ ntụziaka, tupu imelite ọkwọ ụgbọ ala ma ọ bụ wụnye ngwa ọ bụla, akwadoro ịme ndabere iji weghachi kọmputa iji rụọ ọrụ, Windows. M ga-ekweta na otu nkwenye ahụ, mgbe mgbe, m na-enye ... N'ikpeazụ, Windows nwere ọrụ mgbakwunye (ma ọ bụrụ na ịnweghị nkwarụ ya, n'ezie), mana agaghị m akpọ ya nnukwu ihe ndabere ma dị mma.
Ezi ụbọchị. Ịzụta kaadị vidiyo ọhụrụ (na ikekwe kọmputa ọhụrụ ma ọ bụ laptọọpụ) ọ bụghị ihe ọ bụla iji mee nnyocha nke a na-akpọ nrụgide (lelee kaadị vidiyo maka operability n'okpuru ọrụ dị ogologo). Ọ ga-abụkwa ihe bara uru ịchụpụ kaadị vidiyo "ochie" (karịsịa ma ọ bụrụ na i wepụ ya n'aka onye na-amaghị ama).
Ezi ụbọchị. Ngosipụta nke kaadị vidiyo dabere na ọsọ ọsọ nke egwuregwu (karịsịa ndị ọhụrụ). N'agbanyeghị, egwuregwu n'otu oge ahụ bụ otu n'ime mmemme kachasị mma maka ịnwale kọmputa n'ozuzu ya (n'otu usoro mmemme ahụ pụrụ iche na-ekewapụkarị ihe nkiri nke egwuregwu na-ejiri ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji).
Ihe mere Windows10 anaghị amalite n'onwe ya
Ezigbo Andrey Ponomarev! Ngwaọrụ Samsung m na-eche ogologo oge na-acha anụnụ anụnụ nke ọnwụ na ntinye Windows10, ma ntụpọ ahụ bilitere n'oge gara aga bụ: ịmalite, aghaghị m igosi ya ụzọ, iji pịa F2 mgbe ihuenyo na-ekpuchi 4 nzọụkwụ ruo nkwụsị aka-5 ruo P1 akara TSSTcorp CDDUDW SN 208BB-Tinye.
Anya agbaghara mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, gwa m ka m ga - esi zere ịrụ ọrụ?
Ndewo N'agbanyeghi n'eziokwu na narị afọ nke 21 abịawo - afọ nke nkà na ụzụ kọmputa, na enweghị kọmputa ma ọ bụghị n'ebe ahụ ma ọ bụghị ebe a, mmadụ apụghị ịnọdụ ya mgbe niile. Dị ka m maara, oculists na-atụ aro ka ịnọdụ ala karịa ihe elekere otu ụbọchị na PC ma ọ bụ TV. N'ezie, m ghọtara na ha na-eduzi sayensị, wdg.
Isiokwu a bara uru nye ndị kpebiri ịgba ọsọ ngwa ngwa Android na kọmputa ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ otú ngwa ahụ si arụ ọrụ, tupu ibudata na mbadamba ma ọ bụ ama; ọma, ma ọ bụ na-achọ igwu egwuregwu ụfọdụ, mgbe ahụ ọ gaghị ekwe omume ime ya n'enweghị ihe emulator android! N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ọrụ nke emulator kasị mma maka Windows na ajụjụ ndị na-ebilikarị maka ọtụtụ ndị ọrụ ... Ihe dị na 1.
Kedu esi ejikọ Samsung Smart TV na Ịntanetị site na Wi-Fi?
Ndewo N'afọ ndị na-adịbeghị anya, mmepe nke nkà na ụzụ na-aga n'ihu ọsọ ọsọ dị otú ahụ na ihe yiri ka ụnyaahụ ka ọ bụrụ akụkọ ifo bụ taa! M na-ekwu nke a n'eziokwu na taa, ọbụna na-enweghị kọmputa, ị nwere ike ịgagharị na ibe Intanet, lee vidiyo na youtube ma mee ihe ndị ọzọ na Ịntanetị site na iji TV!
Mmepe nke teknụzụ ọmụma chọrọ ịmepụta usoro mgbasa ozi ọhụụ ọhụrụ, ijikọta ngwa-ọma, na-echefu echefu, ederede ederede, mmegharị ma ọ bụ obere mgbagha, ọdịyo na vidiyo. Maka oge mbụ, a doziri nsogbu ndị a site na iji usoro PPT. Mgbe ntọhapụ nke MS 2007, a na-edochi ya na PPTX arụ ọrụ, nke ka na-eji emepụta ngosi.
Ezi ụbọchị. Ọ bụrụ na ike gwụ gị mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmputa, ọ ga-ekwe omume na otu n'ime ihe ndị nwere ike ime abụghị ntọala nyocha kachasị mma (M na-atụ aro ka ị gụọ isiokwu a ebe a: https://pcpro100.info/ustayut-glaza-pri-rabote- za-pc /). Ọzọkwa, echere m na ọtụtụ ndị hụrụ nke a, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ n'azụ otu nyocha, ma n'azụ ọtụtụ: gịnị mere ị ga-eji arụ ọrụ maka otu n'ime ha ruo ọtụtụ awa, na mgbe ọzọ n'ime ọkara elekere, ị na-eche na ọ bụ oge iji tụfuo ma mee ka anya gị zuo ike?
Kedu ihe bụ kọmputa kachasị ọnụ ahịa na kọmputa?
Ndozi nsogbu na-agba ọsọ na Windows 7
Na-arụ ọrụ na plugins bara uru na Notepad ++
Ọ na-achọkarị ka edeghachi isiokwu ahụ na ibe ọ bụla mgbe ị na-ebipụta tebụl ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ. N'ezie, n'ezie, ọ ga-ekwe omume iji chọpụta ebe ederede site na ebe ịchọtara ya ma jiri aka tinye aha na elu nke ibe ọ bụla. Ma nke a ga - ewe oge buru ibu ma mee ka ị kwụsị izu ike nke tebụl. GụKwuo
Otu esi tinye foto na Yandex
Nhọrọ nke egwuregwu free maka ndị debanyere aha PS Plus na Xbox Live Gold na March 2019
https://termotools.com ig.termotools.com © Azịza ajụjụ 2020